Budata Hello Neighbor 2 maka Windows
Free Budata maka Windows (4 GB)
Budata Hello Neighbor 2,
Ndewo Agbata Obi 2 dị na Steam! Ndewo Agbata Obi 2 Alpha 1, otu nime egwuregwu egwu egwu kacha mma na PC, dị ugbu a maka nbudata nefu. Ndewo Ndi Agbata Obi 2 Alpha 1 di maka nbudata nefu tupu Ndewo Ndi Agbata Obi 2 weputara. Ndewo Agbata Obi, otu nime egwuregwu egwu kacha egwu na PC na ekwentị mkpanaaka, bụ ihe na-aga nihu.
Gbalị ịchọpụta Maazị Peterson, onye furu efu mgbe ihe omume nke egwuregwu mbụ ahụ gasịrị, ihe okike dị omimi na-eso gị. Ndewo Agbata Obi 2 dị na Steam!
Download Onye Bu Onye Agbata Obi Ya 2
Ndewo Agbata Obi 2 bụ egwu egwu egwu egwu egwu ebe ị na-achụ gị site na ihe okike na-achọ ịchọta onye agbata obi gị dị omimi. Na-egwu egwuregwu megide mmụta dị elu nke AI, nke na-esote ma na-emegharị ihe ọ bụla ị na-eme.
Amamịghe echiche na-esochi gị. Amamịghe echiche nwere usoro; Toga noké ọhịa ịrahụ ụra, rie nri, sie nri, nwee ike dobe akpa ahụ. Amamịghe echiche na-eji ihe otu ị si eme.
Ọmụmaatụ; Amamịghe echiche na-eme otu ihe ahụ mgbe ị na-eji ihe emenyụ ọkụ iji gbagoo Mepee ụwa: renyocha Raven Brooks, enweghị mmachi na ị nwere ike ịga ebe ọ bụla site na mmalite nke egwuregwu ahụ. Amamịghe echiche na-echebe ụlọ ka ị na-achọ ịbanye,ọ soro ebe ọ bụla ị gara. I nwere akụkọ nke gị.
Ejiri otu ị si egwuri egwu na-eme akụkọ ahụ. Ahụmịhe Sandbox: needkwesiri ịchọta ihe okike iji dozie ihe mgbagwoju anya site na ijikọta ihe dị iche iche, atụmatụ gburugburu ebe obibi na nka. Imirikiti ihe omume egwuregwu na-ahazi nusoro na-adịgide adịgide na usoro enweghị usoro; nke a na-enye mmetụta dị ndụ nke ụwa.
Nwere ike nweta nsonaazụ dị iche iche site na inyocha mmemme egwuregwu na-enweghị usoro.Nwere ike nweta nsonaazụ dị iche iche site na inyocha mmemme egwuregwu na-enweghị usoro.Nwere ike nweta dị iche iche na-arụpụta site ninyocha random na-egwuregwu ihe.
Ndewo Ndi Agbata Obi 2 System chọrọ
Ihe ngwaike nke komputa gi gha agha igwu egwu Onye agbata obi anyi bu nke achoputara nokpuru Ndewo Agbata Obi 2 PC usoro choro;
Processor: Intel i5 ma ọ bụ ka mma
Ebe nchekwa: 6 GB Ram
Ndịna: Nvidia GTX 770 na nelu
Ohere: 4 GB nke ohere dị
Ebe nchekwa: 8 GB Ram
Ndịna: Nvidia GTX 1060
Hello Neighbor 2 Ụdịdị
Nha faịlụ: 4 GB
Kacha ọhụrụ na: 09-02-2022